ကလေးငယ် များတွင် ၀မ်းချုပ်ခြင်း – Burmese Baby
Web Master | January 25, 2017 | Articles, Health | Comments
ဘယ်လို ကလေးငယ်များက ၀မ်းချုပ်လေ့ရှိသလဲ
မိခင်နို့ရည် သောက်သုံးရသော ကလေးငယ်များထက် နို့ဘူးတိုက်သော ကလေးများက ၀မ်းပိုချုပ်လေ့ ရှိပါတယ်။ နို့မှုန့်တွင် ပါဝင်သော အာဟာရများသည် အလွယ်တကူ အစာမကြေ တတ်သောကြောင့် နို့ဘူးသောက်သော ကလေးများသည် ၀မ်းချုပ်ခြင်းကို ပိုမိုခံစားရလေ့ရှိပါတယ်။
ကလေးငယ် ၀မ်းချုပ်နေတယ်လို့ ထင်ပါက အောက်ပါ လက္ခဏာများရှိ၊ မရှိစစ်ဆေးကြည့်ပါ။
**၀မ်းမသွားမီ ကလေးငယ်သည် ဂဏှာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်း
**တစ်ပတ်လျှင် နှစ်ကြိမ်လောက် သာ ၀မ်းသွားခြင်း
သို့သော် တစ်ခါတရံ ၀မ်းအရည်ကျဲကျဲ သွားခြင်းသည် ၀မ်းချုပ်ခြင်း၏ လက္ခဏာဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ၀မ်းချုပ်နေသော်လည်း ၀မ်းအရည်ကျဲ သွားရခြင်း ဆိုသည်မှာ အူမကြီး အောက်ပိုင်း အတွင်း ၀မ်းများမာနေ၍ ထိုဝမ်းအမာ များကိုဖြတ်ကျော်ပြီး ၀မ်းအရည်ကျဲကျဲ သွားရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ၀မ်းအရည် ကျဲကျဲသွားတိုင်း ၀မ်းလျော သည်ဟု မမှတ်ယူသင့်ပေ။
ဘယ်အရာ တွေက ၀မ်းချုပ်စေသလဲ
1. အထက်မှာ ပြောခဲ့သလို နို့မှုန့်တိုက်တဲ့ ကလေးများ (နှို့မှုန့်များဟာ အစာခြေဖျက်ဖို့ ခဲယဉ်းတာကြောင့် ကလေးငယ်ကို ၀မ်းချုပ်စေပါတယ်။)
2. အစာမာများ စားခြင်း၊ အမျှင်ဓါတ်နည်းပါးသော အစာများစားခြင်း
3. ရေဓါတ်ခန်း ခြောက်ခြင်း
4. စားမိသော အစာနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
5. မွေးရာပါ ရောဂါများ – အူမကြီးကောင်းစွာ အလုပ်မလုပ်နိုင်သော
(Hirschsprung’s disease)၊ စအိုဝနှင့် အစာ အိမ်ဟောင်းတို့ ကောင်းစွာအလုပ် မလုပ်နိုင်သော အခြေအနေ(Anorectal malformation)၊ မွေးရာပါ ကျောရိုးကွဲရောဂါ (Spina bifida)၊ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့် အသက်ရူ လမ်းကြောင်း၊ အူလမ်းကြောင်းနှင့် ပန်ကရိယ ထိခိုက်သောရောဂါ (Cystic Fibrosis)
ကလေးငယ်များ ၀မ်းမချုပ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
1. ကလေးကို ပက်လက် အနေအထားထားပြီး ခြေထောက်နှစ်ဖက် ကို စက်ဘီးစီး သကဲ့သို့ ငြင်ငြင်သာသာ လှုပ်ရှားပေးပါ။
2. နို့ဗူးတိုက်ပါက နို့မှုန့်အားညွှန်း ဆိုထားသည့် အတိုင်းသာ ဖျော်စပ်ပါ။ ရေနည်းနည်းနဲ့ ခပ်ပျစ်ပျစ်ဖျော် ထားသော နို့ရည်များသည် ကလေးငယ်အား ၀မ်းပိုချုပ် စေပါတယ်။
3. အမျှင်ဓါတ်များ သောအစားအစာများ၊ အရည်ရွှမ်းသော သစ်သီးများကိုကျွေးပေးပါ။
4. လိုအပ်ပါက ဆရာဝန်နှင့် သေချာစွာတိုင်ပင်ပါ။
Source : Dr. Htet Htet Aung